Xiaomi သည် အိန္ဒိယတွင် ၎င်း၏ ပထမဆုံး Mi Home စတိုးကို ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ Androidsis
အိန္ဒိယကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတိုင်း၊ ဟမ်းမား Simpson ၏အရည်အချင်းအရှိဆုံးအစားအစာပြားများပေါ်တွင်စီးမျောနေသည့်ပုံသဏ္mindာန်သည်သတိရလာပြီးအိန္ဒိယစျေးကွက်၏ဖြစ်နိုင်ချေများကိုသူတို့စဉ်းစားသောအခါအလားတူနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများ၏အမှုဆောင်အရာရှိများကိုစိတ်ကူးကြည့်သည်။ အိန္ဒိယသည်ကြီးမားသောအလားအလာရှိသောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်အိန္ဒိယစျေးကွက်ကိုအနိုင်ယူလိုသော်လည်းအနည်းငယ်သာအောင်မြင်လိမ့်မည်.
ယခု Xiaomi သည် Apple ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများအားအချို့သောကဏ္aspectsများတွင် ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုတော့မည်။ အိန္ဒိယတွင်ပထမဆုံး Xiaomi Mi Home စတိုးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တော့မည်.
1 Xiaomi သည်အားသာချက်ယူပြီးအိန္ဒိယတွင်၎င်း၏ပထမဆုံးအိမ်ကိုမကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မည်
1.1 ၎င်းသည် Mi အိမ်များစွာတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်
Xiaomi မှာရှိပြီးသား ကြေငြာခဲ့သည် အိန္ဒိယတွင်၎င်း၏ပထမဆုံး Mi Home စတိုးဖွင့်လှစ်နိုင်မည်၊ ဖြစ်လိမ့်မည် ဘန်ဂလိုမြို့နှင့်အတိအကျရက်စွဲမပေးရသေးပေမယ့်ကုမ္ပဏီကအာမခံထား စတိုးဆိုင် "မကြာမီ" ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ် ၀ ယ်ယူသူများအား Xiaomi ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးဖြစ်သောစမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များ၊ အရေအတွက်လက်ကောက်များ၊ လေသန့်စင်စက်များ၊ အိတ်များ၊ ပြင်ပဘက်ထရီများ၊ နားကြပ်များ၊
၎င်းသည် Mi အိမ်များစွာတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်
ဤပထမဆုံး Mi Home စတိုးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Xiaomi သည်မကြာမီကာလအတွင်းသူ၏စတိုးဆိုင်အရေအတွက်တိုးချဲ့ခြင်းအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။
Xiaomi (ရှောင်မီ) ကအိန္ဒိယမှာကြီးထွားချင်တယ်ဆိုတာလျှို့ဝှက်စရာမလိုပါဘူး၊ ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်၊ သင်၏ဒုတိယအရေးအကြီးဆုံးစျေးကွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်တရုတ်နောက်ကွယ်မှ။ အဲဒီမှာ Xiaomi အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဝင်ငွေ $ XNUMX ဘီလီယံကျော်လွန်၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းတိုင်းပြည်တွင်သာလည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဆိုသော်လည်းဤသည်ပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အိန္ဒိယတွင်ကြီးထွားရန်ခိုင်မာသည့်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ၊ ထိုနိုင်ငံရှိအကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်လာရန်အတွက် Xiaomi သည်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းဒေါ်လာသန်းငါးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စီစဉ်ထားသည်။ ထို့အပြင်အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီး၏ထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်လိုအားမှာအလွန်မြင့်မားပြီးကုမ္ပဏီကို ဦး ဆောင်နေသည် မကြာသေးမီကအိန္ဒိယ၌ဒုတိယထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖွင့်လှစ်သံသယမရှိဘဲတိုင်းပြည်၏အာဏာပိုင်များကိုအလွန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်။ အိန္ဒိယတွင်ပြဌာန်းထားသောဥပဒေအရတိုင်းပြည်အတွင်းရှိနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှု၏သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်၎င်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအထောက်အကူပြုသည်ကိုသတိရပါ။
ဤနည်းအားဖြင့် Xiaomi သည်၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအင်တာနက်ပေါ်မှရောင်းချခြင်းသည်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိပြီးနောက်ယခုအခါ၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင်တိုးချဲ့လိုသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Mi Home စတိုးကိုဖွင့်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်ရလဒ်ကောင်းများအတွက်ထုံးတမ်းဓလေ့ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်သာမက၊ Xiaomi သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုဖောက်သည်များနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြသရန်အခွင့်အရေးပေးသည်.
၎င်းနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်မြန်ဆန်စွာမဖြစ်နိူင်သော်လည်း Xiaomi သည်၎င်း၏ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်နှင့်ထိုင်ဝမ်တို့တွင် Xiaomi Mi Home စတိုးဆိုင်ရှိသည့်နိုင်ငံငါးနိုင်ငံရှိပြီးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာကုမ္ပဏီအတွက်ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းရောင်းချသူဖြစ်လာသည်ငါအရမ်းနောက်ကျစား အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်။ သို့သော်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကိုသိသောငါတို့အများစုသည်လှပသောစက်ပစ္စည်းများ၊ ကြီးမားသောအရည်အသွေး၊ ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလွန်များသောစျေးနှုန်းများဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိကြသည်။ အချိန်များတွင်ပင်အလွန်နိမ့်။ ဒီအဆောက်အအုံတွေနဲ့အတူသီအိုရီအရဆိုရလျှင်ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်နေပြီးဒီလှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာတော့ Apple ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများ (အိန္ဒိယစျေးကွက်ကိုလည်းအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်) မှန်သော်လည်း၊ , Huawei, Samsung စသည်ဖြင့်ရွေ့လျားသွားလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi သည်၎င်း၏ပထမဆုံး Mi Home စတိုးကိုအိန္ဒိယ၌ဖွင့်တော့မည်